Afgàna Mpatory An-dàlana i Asharaf Barati, Talohan’ny Nahalasa Azy Ho Mpandraharaha Mahomby, Manonofy Ny Hanarina Ny Fireneny · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Novambra 2017 3:52 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, Ελληνικά, Deutsch, Italiano, Português, čeština , русский, Nederlands, English
Andro vitsy taorian'ny nandosirany dia tonga tao Pakistàna i Asharaf. Nandritra ny taona vitsivitsy, niasa tao aminà toerana iray fitrandrahana arintany izy, asa izay nandreraka sy nitondra aretina ho azy. Taorian'izay, nentiny ireo vola kely azony ary nankany Iràna izy, toerana vaovao indray naha-vahiny azy tao anatin'ireo mpitsoa-ponenana marobe, nibaby kitapo feno simenitra mavesatra noho ny vatany mba hahazo vola hivelomana. Toy ny amin'izao fotoana izao, iray amin'ireo toedraharaha fanararaotana tena sarotra no niainan'ireo Afgàna mpitsoaponenana tonga tany Iràna
Nandritry ny fotoana maromaro dia nivenjivenjy teny an'araben'i Roma i Asharaf, tsy nanana hialofana, natory teny an-kianja ary tany aminà fiangonana iray mizara sakafo in-droa isanandro ho an'ireo tsy manan-koraisina no naka sakafo. Raha marina fa lasa toerana iray hahitàna vintana faharoa ho an'ireo izay nisedra fandàvana tany an-kafa i Italia, amin'ny resaka fialokalofana, raha jerena amin'ireo taham-panekena somary avo ihany, dia marina ihany koa fa tena tsizarizary ny fepetra andraisana ireo mpitady fialokalofana. Araka ny ambaran'ny ONG Civil Liberties Union for Europe, (Sendikà Sivily Ho An'ny Fahalalahana ao Eoropa) “tena tsy misy ny mangarahara ao anatin'ilay rafitra. Maherin'ny 3000 ireo “toby tsy misy toa azy” andraisana sy ametrahana ny ankamaroan'ireo mpitady fialokalofana, toerana izay namboarina maimaika, ary olona tsy manana ny fahaizana manao sy tsy tsara ofana no niandraikitra ny fanorenana”.
Araka ny lalàna italiana, tsy afaka miditra any amin'ireo toerana fialofana ny mpangataka fialokalofana raha tsy efa voasoratra ofisialy, dingana iray mety haharitra am-bolana maro aorian'ny nametrahana ny taratasy fangatahana. Mandritra io fotoana io, amin'ireo olona tsy afaka mamoaka vola mba hahitàna toerana hialofana dia tsy maintsy mitodika amin'ny fitadiavana ny fangorahan'ireo namana na matory eny an-kalamanjàna.
Araka ny tombana iray tsy ofisialy, misy eo amin'ny 20.000 eo ireo afgàna ao Italia. Ho an'ny maro amin'ireo mpifindramonina, ho an'ny dian-dry zareo hamonjy fitoviana hafa ao Eoropa dia toeram-piatoana monja ihany ilay firenena. Saingy tato anatin'ny taona vitsivitsy farany, maromaro ireo orinasa tantaninà Afgàna no tafatsangana, indrindra fa ireo toerana fanenoman-damba, fikarakarana fivahinianana, hoely ary toerana fisakafoanana. Nahazo tsikera miabo avy amin'ireo gazety italiàna ny sasany tamin'ireo toerana fisakafoanana tantaninà noho ny haify lafatra avy any an-dakozian'izy ireny.
Ao Venizy ohatra, ao amin'ny toerana fikasafoanana Orient Experience [it] an'i Hamed Ahmadi, mpitsoa-ponenana avy aminà zom-pirenena samihafa daholo ireo mpandroso sakafo sy mpiasa. Tantarain-dry zareo ao anatin'ny lisitra misy ny sakafo aroson'ilay toerana fisakafoana ny dian-dry zareo mandra-pahatongany tao Italia, namakivaky ireo toerana midadasika Afgàna, Irakiàna, tiorka ary grika. Ali Khan Qalandari, afgàna mpandraharaha, dia nanokatra toerana iray vaovao fisakafoanana ao Padoue, antsoina hoe Peace & Spice [it], ary dia Afgàna ihany koa no ao ambadik'ilay “pizzeria Kabulogna” ao Bologne sy toerana iray fihinanana sushi [it] ao Rome.
Kazakhstan 3 ora izay